Maal-qabeenka Inter Milan iibsaday Oo Duullaan Ciyaartoy Doonis Ah Ku Qaadaya Chelsea, Man City iyo Real Madrid
HomeSuuqaMaal-qabeenka Inter Milan iibsaday Oo Duullaan Ciyaartoy Doonis Ah Ku Qaadaya Chelsea, Man City iyo Real Madrid
Milkiilaha cusub ee kooxda Inter Milan Erick Thohir ayaa qorshaynaya weerar ciyaartoy raadis ah oo uu ku qaadayo Chelsea, Manchester City iyo Real Madrid si uu u helo mid ka mid ah weeraryahannada Fernando Torres, Dzeko iyo Alvaro Morata xaagaga soo socda.
Erick Thohir oo waraysi siiyay wargayska La Gazzetta ayaa sheegay in seddexdan weeraryahan midkood uu iman doono kooxda Inter Milan waxaanu intaa ku daray in xiddiga difaaca uga ciyaara Arsenal ee Sagna uu iman doono kooxda haddii uu ciyaartoygaasi go’aan ku gaadho inuu ku biiro Inter Milan.
“Dzeko, Morata iyo Torres midkood ayaan doonaynaa, Sagna isaga ayey wax waliba ku xidhan yihiin”. Ayuu yiidhi Thohir.
Saddexdan weeraryahan ayaan hadda boos joogto ah ka haysan kooxahooda, waxaana la rumaysan yahay in taasi ay keeni doonto inay si fudud uga tagaan dhamaadka xili ciyaareedkan.
Bacary Sagna oo illaa hadda aan wax heshiis ah u saxeexin kooxdiisa Arsenal ayaa loo badinayaa inuu isna isaga tegi doono kooxda dhamaadka xili ciyaareedkan markaas oo uu dhamaan doono heshiiska uu kula jiro Arsenal, waxaana la rumaysan yahay in uu ku waajahan yahay kooxda Inter Milan oo bilaash ku heli doonta.
Furitaanka koobka Aduunka iyo beri : Brasil vs Crotia
11/06/2014 Abdiwahab Ahmed
Sadaal : Shanta Dal ee Afrcia u metalayaa koobka Aduunka
Luis Suárez: Oo Macasalaamaynaya England
Luis Suarez ayaa Liverpool kaga soo biiray kooxda Ajax , isla markii kooxdu ay wayday weeraryahankeedii ay ku dhaaran jirtay ee Fernando Torres oo isagu ku biiray markaasi naadiga Chelsea.